LG G2: မြန်ဆန်သော Remote အတွက် Remote AOSP | Androidsis
LG G2 အသုံးပြုသူများသည်ယခင်ကစဉ်းစားခဲ့သောအရာများထဲမှတစ်ခု AOSP Rom ကို flash လုပ်ပါ ယင်း၏ဆိပ်ကမ်းများ၌မူ LG LG ကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏မူရင်း LG ကင်မရာသို့မဟုတ်ဤစင်ကြယ်သော Android Roms အမျိုးအစားများတွင်အသုံးမပြုနိုင်သော application များ၏လိုက်ဖက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာမှတ်စုတို o လျင်မြန်သော Remote။ အကယ်လို့ LG G2 or ရဲ့မူလကင်မရာလိုမျိုးဒီ application တွေအကြောင်းပြောရင်မင်းဘာပြောမလဲ Quick Remote, ဒီ Android ROM အမျိုးအစားမှာဘာပြproblemနာမှမရှိဘဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် LG ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်တည်ငြိမ်သော Android အတွေ့အကြုံများကိုပေးသည့်မည်သည့်သန့်ရှင်းမှုရှိသနည်း။
ဒီနေ့ရဲ့ပို့စ်မှာမင်းတို့အားလုံးကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုငါပြောပြမယ် AOSP Rom နှင့်အတူ LG G2 တွင် Quick Remote ကိုထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သော Android ။ ငါပြသသောအခြားဖြည့်သော post တစ်ခု LG G2 ကင်မရာကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ, Android LG Roms အမျိုးအစားနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာများမရှိဘဲမူလ LG application မှပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုမဆုံးရှုံးစေရန်။
Quick Remote ကို install လုပ်နည်း Pure Android AOSP Roms
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ချုံ့ထားသောဖိုင်ကို ZIP ပုံစံဖြင့်ကူးယူပါ လျှောက်လွှာနှင့်သက်ဆိုင်သည် LG G2 တွင် AOSP Roms ဖြင့် Flash လုပ်နိုင်ရန်လျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သော Android ။ LG G2 ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်၏ရင်းမြစ်သို့ ZIP ပုံစံဖြင့်ကူးယူသွားမည်ဖြစ်သည့်မည်သည့်ဗားရှင်းနှင့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆို ZIP ပုံစံဖြင့် compressed လုပ်ထားသောဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုဝင်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် LG G2 ကိုလုံးဝပိတ်ပြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်း နှိပ်၍ ခလုတ်များကိုမလွှတ်ဘဲပြန်ဖွင့်သည်။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုဆင်းပေါင်းပါဝါခလုတ်ကို, LG Logo ကိုမြင်သောအခါခလုတ်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းလွှတ်ပေးပြီး၎င်းတို့ကိုချက်ချင်း နှိပ်၍ ဖန်သားပြင်ထိတိုင်အောင်ကိုင်ထားပါ။ hard Reset။ ဒီဖန်သားပြင်တွင်ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ရယူခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုလိမ့်မည် နှစ်ကြိမ်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သို့မဟုတ်ပေါ်။
ပြီးတာနဲ့အဲဒီမှာငါတို့ option ကိုရိုက်ထည့်ဖို့သာရှိသည် Install အရင် download လုပ်ထားသော Quick Remote zip သို့သွားပါ။ ၎င်းသည်အသုံးဝင်မည့် application ၏ installation ကိုအတည်ပြုပါ ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက် universal universal ဝေးလံခေါင်ဖျားဂီတသုံးပစ္စည်းများ၊ DTT နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး။
ဤသင်ခန်းစာနှင့်အတူရှင်းပြထားပြီးဖြစ်သောအခြား LG များနှင့်မူရင်း LG ကင်မရာတပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်မရှိခြင်းအတွက်ကုစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မူရင်း LG အက်ပလီကေးရှင်းတွေနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောသင်ခန်းစာများသို့မဟုတ် application အချို့ LG Quick Memo LG G2 ၏သုံးစွဲသူများသည် Android ၏ဤဗားရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုမွမ်းမံခြင်းဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိသည့်အခြားအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအခါငါကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်သင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာပို့စ်များကိုမှ link တစ်ခုထားခဲ့ပါ Non-လိုက်ဖက်တဲ့တန်ပြန် လိုမျိုး applications များနှင့်အတူ LG Quick Memo:
SketchBook, အခြား Android terminal များအတွက်ယခု Samsung Galaxy Note3note application ကို download လုပ်ပါ။ - ဒါသွားတယ် LG က Quick Memo အတွက်လုပ်တာထက်ပိုပါတယ်.
Amazing Android Apps: Today Copy Bubble။ - ဒါသွားတယ် LG က clipboard မှဖြည့်စွက် နှင့်၎င်း၏မျိုးစုံကူးယူ။
LG G2 ကင်မရာကို AOSP Roms တွင်တပ်ဆင်ပါ။ - ဒါသွားတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏မူလကင်မရာကိုတပ်ဆင်ပါ.
ဒေါင်းလုပ် - အမြန် Remote.zip, ကြည့်မှန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2: မြန်မြန်ဆန်ဆန် Remote ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်နည်း Android POS Android
g2 mini အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား
Emanuel Perez အားပြန်ကြားပါ
ငါအဲဒါကို s4 mini မှာထည့်သွင်းထားပေမယ့်ဒီ application ကို install လုပ်ပြီးရင်ငါ့ကို lg TV နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်မပြုပါ။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။
အလက်ဇန်းဒါး Beato ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤလေယာဉ်ဖြင့်လေအေးပေးစက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ရှိမရှိသိလိုသည်။ ပထမပုံတွင် g2 ၏အမြန်ဝေးကွာသောပုံပေါ်လာပြီးဒုတိယပုံတွင် g3 နှင့် g3 ၏တို့သည်လေအေးပေးစက်အတွက်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆောင်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Alexander Beato အားပြန်ပြောပါ
ဟိုဆေး grillet ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောအျခား android terminal တွင်အမြန် remote ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းရှိပါသလားသိလိုပါသလား။
Jose Grillet သို့ပြန်သွားပါ
Alejandro Diaz Seville ဟုသူကပြောသည်
LG G3 Quick Remote တွင်လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည်၊ ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်၎င်းကိုလေအေးပေးစက်လည်ပတ်စေသည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
Alejandro Díaz Sevilla အားပြန်ပြောပါ
၎င်းသည် zip ကိုကျွန်ုပ်အားဒေါင်းလုပ်ချခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစာမျက်နှာသို့လမ်းညွှန်သော်လည်းမည်သည့်အခါကမျှဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ
ဖုန်းကိုဖွင့်သောအခါ flahshear ပြီးနောက်၊ မြန်သော forward လုပ်ခြင်း application ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်သွားသည်ဟူသောစဉ်ဆက်မပြတ်သတိပေးချက်ပေါ်လာသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအဖြေပေးနိုင်မလား။
Daniel Pena ဟုသူကပြောသည်
cm12 နဲ့အတူငါခဏတာနုတ်ထွက်လိုက်တယ်၊ အဲဒီနောက်မှာအဆင်ပြေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အခုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှုံးနိမ့်သွားတယ်
ဟယ်လို…။ ငါ g3 စည်းချက်ကိုသာရယူလိုက်ပြီး၎င်းသည်လေနှင့်အခြားအရာများကိုထိန်းချုပ်ရန်လုံးဝသေချာသည်မဟုတ်! ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ quick remote မဟုတ်တဲ့တခြား app တွေကဒီကွန်ပျူတာမှာအလုပ်မလုပ်လို့ပါ။
လျှောက်လွှာကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်ရမည်နည်း။ lg remote ၏လျှောက်လွှာ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ်၏ကြိုး2802 နှင့်အတူ lg g14.1 d7.1.1 ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်စက်ရုံမှရရှိသောအမြန်ဝေးလံခေါင်ဖျားမှုကိုလိုချင်။ မည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။ သင့်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
သင်၏စမတ်နာရီသို့မဟုတ်စမတ်နာရီအတွက်လိုအပ်သော Android Wear အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခု